JL- Kismaayo oo Doorashada Aqalka hoose ee barlamaanka federalka soomaaliya ka socoto iyo xubnaha guuleystey. | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home Macluumaadka GMDQ & Xisbiyada JL- Kismaayo oo Doorashada Aqalka hoose ee barlamaanka federalka soomaaliya ka socoto...
JL- Kismaayo oo Doorashada Aqalka hoose ee barlamaanka federalka soomaaliya ka socoto iyo xubnaha guuleystey.
Tartankii kuraaska xubnaha aqalka hoose ee baarlamanka dalka qeybta Jubaland ayaa weli ka soconaya magaalada Kismaayo, ayadoo maanta la doortay ilaa lix Mudane.
Doorashada ayaa saaka si dardar leh uga bilaabatay hoolka Daawad ee magaalada Kismaayo, ayadoo ay xarunta ku sugnaayeen ergada lixda Beelood ee maanta ku tartameeysay kursiga aqalka hoose ee baarlamanka.
Gudiga doorashooyinka dadban ee Jubaland ayaa markii ay doorashooyinka soo idlaadeen warbaahinta u aqriyay xubnaha guuleystay, waxaana goobta ka shaaciyay ka C/casiis Sheekh Dayib oo gudiga qaran ee doorashooyinka dadban ee heer federaalka u qaabilsan Jubaland.
Iyadoo ay soo yeerayaan caddaalad daro iyo musuq maasuq hareeyey doorashada ka socota xarumaha Maamul goboleedyada ayaa hadana kismaayo waxaa ka dhacey Dil abaabulnaa oo meesha looga saarey musharax rabey in uu kursi aqalka hoose u tartamo sababna looga higey labo nin oo gurigiisa isku dishey.
Xubnaha doorashadii maanta ku guuleystay ayaa kala ah sidan;
Prof: Max’ed Cabdi Gaandi
Max’ed Aadan Macallin
Xaawo Max’d Aadan
Max’ed Xasan Idiris
Sahro Jaamaca Cali Qoorsheel
Dhinaca kale, Wakiilka gudiga qaran ee doorashooyinka dadban ee Jubaland ayaa beeniyay warar lagu baahiyay baraha ay bulshada isticmaasho oo sheegayay in ciidamo gadoodsan ay la wareegeen hoolka ay ka socoto doorashada, isagoo sheegay in wararkaasi ay yihiin kuwo been abuur ah.
“Doorashada waad u jeedaan si qurux badan ayay noogu soo dhamaatay, wararkan la sheegayana waxba kama jiraan, hadayse run yihiin miyay halkan doorasho ka dhici lahayd,” sidaa waxaa yiri C/casiis oo warbahinta la hadlayay.
Previous articleGaalkacyo oo la filayo in ay soo gaaraan wakiilka Q/M Meachal Keating iyo wafdi uu horkacayo.
Next articleMadaafiic caawa leysku weydaarsadey magaalada Gaalkacyo iyo eedeymo ay isu jeedinayaan dhinacyadii maanta heshiiyey.